Global Voices teny Malagasy » Avonavon’Ampanjaka Tamin’Ampanjaka Iray Hafa Niteraka Adihevitra Mafana Tao Nizeria · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Mey 2017 5:21 GMT 1	 · Mpanoratra Nwachukwu Egbunike Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Nizeria, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka
Vao haingana ny Chartered Institute of Bankers of Nigeria  (CIBN) na Ivontoerana Solontenan'ny Mpandraharahan'ny Banky ao Nizeria no nampiantrano ny andiany faha-22 amin'ny Fihaonambe Manerantanin'ny Ivontoeran'ny Banky notontosaina tao Lagos, Nizeria. Na dia izany aza, ratsy ny vaovao momba ny lanonana nivoaka tao amin'ny CIBN noho ny hadalana nataon'ny ampanjaka iray nandritra ny lanonana fanokafana ny fihaonambe. Nambanian'ny Oba ao Lagos, dia ny ampanjaka Oba Rilwan Aremu Akiolu  ny Ampanjaka Imperialy na ny Ooni ao Ife Oba Adeyeye Enitan Ogunwusi .
Mitantana demaokrasia federaly rafetin'ny fanjakana 36 sy governemantam-paritra marobe an-toerana i Nizeria. Na dia izany aza, ahitana fanjakana nentim-paharazana matanjaka  nanjaka talohan'ny fanjanahantany ihany koa ny firenena. Tsy mampiasa fahefana ara-politika intsony ireo ampanjaka nentim-paharazana  ireo, saingy manana fahefam-panintonana tanteraka kosa any amin'ny sehatra misy azy ireo tsirairay avy any. Samy manana ny heriny tsirairay avy izy ireo any amin'ny misy azy any amin'ny fitazonana ny fandriampahalemana ary tonga hatrany amin'ny famahàna ny ady amin'ny alalan'ny rafi-pitantanana nentim-paharazana izany. Manana hery goavana ao amin'ny politika Nizeriana ankehitriny  ihany koa ny ampanjaka nentim-paharazana saranga voalohany . Matetika ihany koa izy ireo tadiavin'ny mpanao politika na/sy ny governemanta hahazoana ireo olom-pirenena eny ifotony.
Ao amin'ny lahatsary eo ambony, rehefa avy nifananihany tamin'ny Ampanjaka Igwe Nnaemeka Achebe , izay Obi ao Onitsha  ny Ooni ao Ife dia nandeha niarahaba ny Oba ao Lagos izay niavona ankitsirano ny Ooni.
Wale kosa nanoro-hevitra ny Oba ao Lagos mba hanatsoaka lesona avy amin'ny Filoha teo aloha Olusegun Obasanjo , fa na dia zokiny kokoa noho ny Ooni aza izy dia nanaja ny sezan'ny Oba tanora tamin'ny fiondrehana teo am-piarahabana:
Tsy vao sambany tafiditra anaty adihevitra ny Oba ao Lagos. Tamin'ny volana Aprily 2015, niteraka tabataba goavana tao amin'ny firenena ny fandrahonana nataony tamin'ny vahoaka fa “ho faty an-drano”  [mg] izay tsy manaraka ny fombany [didiny amin'izay olona tokony hofidiana].
Na izany aza, namerina ny fanajany ny mpanjaka rahalahiny ny Ooni. Nilaza  izy fa “mbola manaja tanteraka an'i Oba Akiolu ary ny zava-nitranga omaly dia tsy hanakana ny Ooni hanaja azy”.
Kanefa, nandà ny filazana fa niavona tamin'ny Ooni ny Oba ao Lagos. Nanazava i Oba Akiolu fa nosakanan'ny fomba amam-panao ao Lagos tsy hanoroka ny Ooni izy. Araka ny filazan'i Oba Akiolu , “afaka mieritreritra izay tiany ny rehetra. Tsy nisy na inona na inona tao. Tahaka izany ny fomba amam-panao na ny fomban-drazana ao Lagos. Tsy mifanolo-tanana izahay, tsy mifamihina. “
Na izany aza, nilaza ny Insider Source  fa mety misy ifandraisany amin'ny fifamaliana tamin'ny Ooni ao Ife ny fihetsik'i Oba Akiolu :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/03/99116/
 Chartered Institute of Bankers of Nigeria: https://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Bankers_of_Nigeria
 Fihaonambe Manerantanin'ny Ivontoeran'ny Banky : http://www.wcbi2017.com/
 fanjakana nentim-paharazana matanjaka: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nigerian_traditional_states
 ampanjaka nentim-paharazana: https://en.wikipedia.org/wiki/Nigerian_traditional_rulers
 politika Nizeriana ankehitriny: http://maxwellsci.com/print/crjss/v4-407-414.pdf
 ampanjaka nentim-paharazana saranga voalohany: https://olivernwokedi.wordpress.com/2015/02/18/a-list-of-the-most-influential-traditional-rulers-in-nigeria/
 Obi ao Onitsha: https://en.wikipedia.org/wiki/Obi_of_Onitsha
 fanajana fatratra ireo mpitarika”: http://www.bbc.com/news/world-africa-39724873?ocid=socialflow_twitter
 Filoha teo aloha Olusegun Obasanjo: https://en.wikipedia.org/wiki/Olusegun_Obasanjo
 akanin'ny sivilizasiona Yoruba : http://leadership.ng/features/435157/ile-ife-cradle-of-yoruba-civilisation
 “ho faty an-drano”: https://mg.globalvoices.org/2015/04/19/69031/